कानूनको शासनमा अमेरिकी अनुभव र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन | Nagarik News - Nepal Republic Media
कानूनको शासनमा अमेरिकी अनुभव र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन
२९ पुस २०७७ १५ मिनेट पाठ
अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ। करीब २३१ बर्ष पुरानो र यति संक्षिप्त संविधान भईकन पनि यति धेरै सफल र दीगो संविधानको रुपमा स्थापित छ। यो सफलताको कारण भनेको यसमा समय सापेक्ष रुपमा विभिन्न संशोधन तथा अदालती व्याख्याको माध्यमबाट यसका पालनकर्ताहरुले संधै यसलाई सिरोधार्य गर्दै आएका छन। संविधान, कानून तथा विधि प्रति सबै प्रतिबद्ध छन।
कानून उल्लंघनलाई गम्भिर रुपमा लिईन्छ र सोही बमोजिम दण्ड सजायँ गरिन्छ। अमेरिकी कानूनी प्रणाली वा समाजले सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुबै रुपमा कानूनको शासन (Rule of Law) लाई यथार्थ तथा व्यवहारिक रुपमा आत्मसाथ गरेको छ। कानूनको शासनका आधारहरुमा न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिता (Justiciability, Reasonability and Farsightedness) लाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अबलम्बन गरिएको छ। कुनैपनि मुद्दा वा विवादको समाधानमा अदालत वा न्यायिक निकायहरुले संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग तथा ब्याख्या गर्दा संधै न्यायोचित, तार्किक र दूरदर्शि ढंगले गरेको पाईन्छ। मुद्दा वा विवादहरु चाहे फैसलाबाट होस वा अन्य माध्यमबाट समाधान गर्दा न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिता अनिवार्य रुपमा अबलम्बन गरिएको पाईन्छ। अझ महत्वपूर्ण बिषय यो छ कि मुद्दा वा विवादको फैसला गर्दा कतिपय अवस्थामा समग्र समाज र जनताको हितलाई बिचार गरेर सार्वजनिक नीति (Public Policy) लाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिईन्छ। अमेरिकाको उन्नति एवं सफलताको कारण नै कानूनको शासन (Rule of Law) लाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्नु हो भन्दा फरक पर्दैन। हुनपनि, आधुनिक समाजमा कुनैपनि देश कति सफल वा विकसीत छ भन्ने कुराको मापन गर्ने परीक्षण विधि भनेको त्यो देशमा कानूनको शासन छ कि छैन ? यदि छ भने कति हद सम्मको त्यसको ब्यवहारिक पालना वा कार्यान्वयन भएको छ त ? सोही आधारमा सफलताको स्वरुप निर्धारण गर्न सकिन्छ। कुनैपनि शासन व्यवस्थाको पद्धतिको जग बसाउनेदेखि लिएर समुन्नत, सभ्य र विकसीत समाज निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार नै न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शितामा आधारित कानूनको शासन हो।
यसरी हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसम्म पुग्नका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण (Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। एकैपटक उपधारा ७ लाई टेकेर विघटन गर्ने स्वेच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिंदैन।
अर्कोतर्फ, नेपालको बर्तमान शासन पद्धति West Ministerial System सँग सन्निकट छ, तसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्कपनि सुनिन्छ तर त्यस्तो तर्क तर्कसंगत छैन।
जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको छ, त्यो आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भन्ने कुरा कहींकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा कानून व्याख्याको प्रचलित मान्यता विपरीत हुने गरी प्रचलित परम्पराको आधार भन्दै पुरानो भैसकेको West Ministerial System को जिकिर यहाँ सान्दर्भिक वा मान्य हुन सक्दैन।
जुरिस डाक्टर (अमेरिका), एल. एल. एम. (नेपाल)
हाल टेक्सास, अमेरिका
प्रकाशित: २९ पुस २०७७ १६:३४ बुधबार
संसद विघटन संविधान